अघोर बाबा पछि अचानक जंगी बाबा पनि रुँदै मिडियामा आए ,कसले के गर्यो जंगी बाबालाई ? (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
अघोर बाबा पछि अचानक जंगी बाबा पनि रुँदै मिडियामा आए ,कसले के गर्यो जंगी बाबालाई ? (भिडियो सहित)
Sisir Budhathoki November 6, 2019
झापा । विभिन्न सामाजिक संजालमा चर्चित बनेका चर्चित अघोरी बाबाले बिहे गरेपछी एकाएक फेरि भाइरल बनेका छन् । अघोर बाबाले विबाह गरे भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्ला । तर उनले आफ्नो जीवन संगिनी रोजेका छन । वास्तवमा उनले विवाह भने करिब तिन महिना अगाडी गरेका हुन् तर उनले यो कुरा गोप्य राखेका थिए ।
केहि महिना अगाडीको अन्तर्वार्ताहरुमा विवाहको प्रश्न गर्दा उनले चितामा मात्र मेरो विवाह हुने बताउने बाबाले विवाह गरेको खबर सुन्दा धेरै भक्तजनहरु चकित परेका छन । अघोर बाबाको कुराहरुलाई जंगी नाम गररेका बाबाले बिरोध गरेपछि मलाइ मार्छु भन्दै धम्कि दिए भन्दै जंगी बाबा आक्रोशित भए । नाम मात्र जंगी नभएर काम पनि उनको त्यस्तै छ । उनले भर्खरै ५ हजार पैसा र केहि खाने कुरा एक दुखित आमा छोरालाइ सहयोग गरेका छन् । जंगी बाबाले सहयोग गर्दा त्यो दुख देखेर आँखा बाट आँशु झारे ।